Ahoana no Havalinao Ataovy antso ao amin'ny Apple Watch
Aprily 14, 2020 ny Facetime Guide Leave a Comment
Moa ve mahatakatra ny andro ho avy rehefa afaka miantso olona mivantana avy amin'ny hatotanany? Na inona na inona hita ny zavatra izay Sci-Fi na ny fanaka, na izany aza azonao atao, raha ny marina, hanao sy hahazo antso amin'ny Apple Watch. On Apple Watch, antso dia steered ny alalan 'ny iPhone, nefa hainao ny mamaly na dia amin'ny iPhone amin'ny efitra hafa, na miafina ao anaty paosy, mitondra amin'ny resaka manontolo mivantana avy amin'ny fiambenana.
1 Namaly ny antso tao amin'ny Apple Watch
2 Ny fanaovana ny miantso Apple Watch
Namaly ny antso tao amin'ny Apple Watch
Tamin'ny fotoana, rehefa tonga ny antso dia ao, tokony paompy fotsiny ny valiny maitso bokotra. Ao amin'ny zava-nitranga fa ho tia ny tsy hamaly izany, dia afaka tap mena sy fitontonganan'ny bokotra mandefa ny antso ny feon hafatra.
Afaka manapa-kevitra ny hamaly toy izany koa ny fomba ny iPhone na mandefa hafatra indray mipy maso. Tamin'ny fotoana, rehefa tonga ny antso dia ao, hampody ny Digital Crown na swipe miakatra mba hahazo ireo safidy.
Ao amin'ny zava-nitranga fa ianao no eo amin'ny fiaraha-mikorana, na be atao amin'ny ankapobeny sy ny tsirambina sy tsy manetsiketsika ny Apple Watch tany am-boalohany, haingana dia afaka nampangina ny feon'ny manatona antso amin'ny alalan'ny manarona ny Apple Watch ny Asehoy ny ampela-tananao ny telo segondra. Tamin'izay fotoana izay dia manamarina fa paompy mba mangina io dia mahazo vahana.
Ny fanaovana ny miantso Apple Watch
Afaka manao antso an-telefaonina ho an'ny olona eo amin'ny Favorites Lisitry ny fanosehana ny Side bokotra ambanin'ny Digital Crown. Tamin'izany fotoana, hampody ny Digital Crown na tap fanafohezana ny olona hifidy. Tamin'izany fotoana, Tsindrio ny antso ao am-pototry mariky havian'ny efijery.
Ary tamin'ny eny mby amin'izay tokony antso olona izay tsy eo amin'ny lisitra Favorites, tap ny fampiharana ao amin'ny Apple Phone Watch sy hiverina ny Digital Crown na swipe ny hifandray aminao te-hiantso. Afaka mangataka Siri toy izany koa mba hanao antso an-telefaonina ho aminareo, na dia hoe: “Call” ary ny fanomezana anarana olona eo amin'ny fikarakarana ny fifandraisana. Siri hametraka ny telefaonina antso ho anao.
Miresaka amin'ny Apple Watch mahatsapa somary tsy mahazatra hatramin'ny voalohany, ary tokony hihazona azy io stratejika lavitra avy amin'ny misokatra satria mitady ho sarotra ny hihaino olona avy amin'ny Apple Watch mpandahateny rehefa misy tabataba manodidina. Manaiky ny fomba fijery ny Apple Watch no, na izany na tsy izany, faran'izay manampy amin'ny zava-nitranga fa mila miresaka amin'ny olona sy ny iPhone tsy akaiky ny. Fanampin'izany, hainao ny mamaly ny fomba Apple Watch, halainao izay fotoana ilaina ny fahazoana ny iPhone, ary indrindra ny mifamadika izy raha vonona ianao. Tsy hita intsony antso.
Jereo ity lahatsoratra ity, izay ahitana vaovao momba ny tanteraka Ahoana no Havalinao Ataovy antso ao amin'ny Apple Watch Raha tsy misy Pairing ny iPhone. Vakio tsara ny lahatsoratra sy manaraka ny fomba izay manazava ny dingana mba hamaly ka hanao antso mora foana.
Azonao am-palalahana ny manontany ny fanontaniana mifandray amin'ity lahatsoratra ity amin'ny fampiasana ny fanehoan-kevitra etsy ambany miresaka momba boaty. Hamangy ny tranonkala downloadfacetime.com Raha mila fanazavana ilaina tapaka.
Filed Under: Download Facetime Tagged With: Ahoana no Havalinao Ataovy antso ao amin'ny Apple Watch